SIDA LOO RAKIBO NET FRAMEWORK 3.5 ON WINDOWS 10 NOOCA 21H2 - JILICSAN
Sida loo rakibo net Framework 3.5 on Windows 10 nooca 21H2
Helitaanka NET Framework 3.5 qalad rakibaadda 0x800F0906 iyo 0x800F081F? Cilad Windows waxa ay ku xidhmi wayday intarneedka si ay u soo dajiso faylalka lagama maarmaanka ah Hubi inaad ku xidhan tahay intarneedka oo dhagsii 'dib u tijaabi' si aad mar kale isugu daydo. Koodhka qaladka: 0x800f081f ama 0x800F0906 marka la awoodo / Ku rakib NET Framework 3.5 Windows 10 kombuyuutar / Laptop. Waa kuwan qaar ka mid ah siyaabaha fudud ee si guul leh loogu rakibo NET Framework 3.5 on Windows 10 iyada oo aan wax qalad ah la rakibin.
Sida caadiga ah kombiyuutarada Windows 10 iyo 8.1 waxay ku yimaadaan horay loogu sii rakibay NET Framework 4.5. Laakiin apps lagu sameeyay Vista iyo Windows 7 waxay u baahan yihiin NET qaabdhismeedka v3.5 lagu rakibay 4.5 si uu si sax ah ugu shaqeeyo. Mar kasta oo aad ku shubto apps-kan Windows 10 waxa ay kugu dhiirigelinaysaa in aad soo dejiso oo aad ku rakibto NET Framework 3.5 intarneedka. Laakiin marmarka qaarkood isticmaalayaashu waxay soo sheegaan NET Framework 3.5 rakibaadda ku guul darreystay qaladka 0x800F0906 iyo 0x800F081F.
Daaqadaha ma dhamaystiri karayn isbeddellada la codsaday.
Daaqadaha ayaa ku xidhmi kari wayday intarneetka si loo soo dejiyo faylalka lagama maarmaanka ah. Hubi inaad ku xidhan tahay intarneedka oo dhagsii 'dib u tijaabi' si aad mar kale isugu daydo. Koodhka qaladka: 0x800f081f ama 0x800F0906.
Ku rakib qaabka net 3.5 ee windows 10
Haddii aad sidoo kale helayso qaladkan 0x800F0906 iyo 0x800F081F halka ku rakib NET Framework 3.5 Windows 10 iyo 8.1 kombiyuutar. Halkan raac xalalka hoose si aad u hagaajiso Khaladkan oo aad si guul leh ugu rakibto .net 3.5 windows 10 iyo 8.1.
Ku rakib .NET Framework 3.5 on Features Windows
Si fudud u fur Control Panel -> Barnaamijyada iyo Astaamaha -> Daar ama dami ikhtiyaarka Windows. Kadib dooro .NET Framework 3.5 ( ku dar 2.0 iyo 3.0) oo guji ok si aad u soo dejiso oo ku rakib .net Framework 3.5 Kumbuyuutar Windows ah.
Daar .NET Framework Adigoo isticmaalaya amarka DISM
Haddii rakibidda qaab-dhismeedka shabakadu ku guul-darreystay in lagu suurtogeliyo iyada oo loo marayo Features Windows Ka dib adigoo isticmaalaya khadka taliska DISM ee fudud waxaad ku rakibi kartaa NET Framework 3.5 iyada oo aan wax qalad ah ama dhibaato ah jirin. Si aad tan u sameyso marka hore Soo deji microsoft-windows-netfx3-ondemand-package.cab oo koobbi faylka la soo dejiyay netfx3-onedemand-package.cab galka Windows Installation Drive (C : Drive ). Dabadeed Fur Command Prompt Sida maamulaha Oo ku qor amarka hoose oo taabo geli si aad ufuliso amarka.
Dism.exe /online/enable-feature /Featurename:NetFX3 /source:C:/LimitAccess
Fiiro gaar ah: Halkan C: waa daaqadahaaga rakibaadda meesha aad nuqul ka sameysato Microsoft Windows netfx3 ondemand xirmo.cab . Haddii dariiqa rakibaaddaagu ka duwan yahay ka dibna C ku beddel magacaaga darawalka rakibaadda.
Taliska ayaa sharaxay
/ khadka tooska ah: waxay beegsataa nidaamka qalliinka ee aad ku shaqaynayso (halkii sawirka Windows ee khadka tooska ah).
/Awood-sifada /FeatureMagaca NetFx3 waxay qeexaysaa inaad rabto inaad awood u siiso .NET Framework 3.5.
/Dhammaan: awood u siinaysa dhammaan sifooyinka waalidka ee .NET Framework 3.5.
/ Xadka Galitaanka: waxay ka hortagtaa DISM inay la xiriirto Windows Update.
Sug ilaa 100% uu dhammeeyo Taliska, ka dib, waxaad heli doontaa fariin Hawlgalkii si guul ah u soo dhamaaday. Xidh amarka degdega ah oo dib u bilow daaqadaha si aad u hesho Bilow Cusub.
Taasi waa waxa kaliya ee aad si guul leh ugu rakibtay .net framework 3.5 kombayutarka windows 10 Adigoon Wax Khalad Ah La helin 0x800f081f ama 0x800F0906. Wali hayso wax su'aal ah, soo jeedin ah, ama la kulmi wax dhibaato ah markaad ku rakibayso .net Framework 3.5 on Windows 10 iyo 8.1 kombayutarka waxaad xor u tahay inaad ka hadasho faallooyinka hoose.
Hagaaji windows 10 network 3.5 Qaladka Rakibaadda 0x800f0906, 0x800f081f
Hagaaji Windows Update ku xayiran soo dejinta cusbooneysiinta ee windows 10
Windows 10 Cusbooneysii ku dheggan soo dejinta? Isku day xalalkan
Fix System Restore si guul leh uguma dhammaystirmin Windows 10
Codsiga ayaa awoodi waayay inuu si sax ah u bilaabo (0xc000007b) Windows 10